Wasiirrada IGAD oo Kulankoodii ugu Horreeyay ku Yeelanaya Mag. Muqdisho |
Wasiirrada IGAD oo Kulankoodii ugu Horreeyay ku Yeelanaya Mag. Muqdisho
eeshaan muddo ka badan 24-sano.
Ilo-wareedyo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in shirku uu dhici doono 10-ka bishan Jannaayo oo ku beegan Sabtida soo socota, iyadoo intiisa badan looga hadli doono arrimaha Soomaaliya.
Sidoo kale, ilo wareedyadan ayaa sheegay in qaban-qaabada shirka IGAD ay ka billaabatay Muqdisho, iyagoo sheegay in shirkan uu socon doono muddo hal maalin ah.
Madaxweynaha Somalia, Xasan Shiikh Maxamuud ayaa shirka wasiirrada ka socda dalalka IGAD furi doona, maadaama ay Somalia xubin muhiim ah ka tahay IGAD oo ah urur ay ku mideysan yihiin dalalka ku yaalla Bariga Afrika
Si kastaba ha ahaatee, IGAD ayaa waxaa xubno ka ah Somalia, Itoobiya, Uganda, Jabuuti Suudaan, Kenya iyo South Sudan oo labo sano ka hor ku soo biirtay, waxaana horay uga baxday dowladda Ertirea.